Mpanamboatra sy mpamatsy Snubber - Factory Snubber China
ROHS sy REACH mifanaraka Axial snubber capacitor SMJ-TE
CRE isan-karazany ny IGBT capacitors snubber dia ROHS sy REACH mifanaraka.
1. Toetra mahatanty lelafo
2. Varavarana plastika na fonon-kasety Mylar
3. epoxy farany feno
4. Mifanaraka amin'ny UL94
5. Custom natao azo
Ny CRE dia manome karazana capacitor snubber rehetra
1. Ny kapasitera fanamoriana fanamafisam-peo vaovao dia novolavolaina sy novokarin'ny CRE
2. CRE no mpitarika amin'ny famolavolana sy famokarana capacitor sarimihetsika.
3. Raha toa ianao ka mila manokana damping absorption capacitor fepetra arahana, mankanesa any amin'ny famolavolana foibe ho an'ny namboarina capacitor.
Izy ireo dia ampiasaina voalohany indrindra mba hamerana ny tahan'ny fiakaran'ny tosi-drà amin'ny circuits izay
tafahoatra, mba hiarovana ny switching sy ny fiarovana ny semiconductors amin'ny hery
elektronika;fanivanana sy fitahirizana angovo.
Ny faritra fampiharana lehibe dia rectifier, SVCs, famatsiana herinaratra lokomotif, sns.
GTO snubber capacitor amin'ny fitaovana elektronika herinaratra
Ny circuit snubber dia tena ilaina amin'ny diodes ampiasaina amin'ny circuit switching.Afaka mamonjy diode amin'ny spikes overvoltage izy io, izay mety hipoitra mandritra ny dingana fanarenana miverina.
Famolavolana kapasitera sarimihetsika snubber avo amin'izao fotoana izao ho an'ny fampiharana elektronika herinaratra IGBT
1. Fonosana plastika, voaisy tombo-kase amin'ny resin;
2. Fampidirana varahina vita amin'ny vifotsy mitarika, fametrahana mora ho an'ny IGBT;
3. Ny fanoherana ny voltase avo, ny tgδ ambany, ny fiakaran'ny mari-pana ambany;
4. ambany ESL sy ESR;
CRE snubber film capacitors dia natao ho an'ny tampon'isan'ny asa amin'izao fotoana izao ilaina amin'ny fiarovana amin'ny transient voltages.
1. avo dv/dt mahazaka fahaiza-manao
2. Fametrahana mora ho an'ny IGBT
Kilasy avo lenta IGBT Snubber capacitor famolavolana ho an'ny fampiharana hery avo
5. High pulse Current;
6. UL taratasy fanamarinana.
Polypropylene Snubber Capacitors ampiasaina amin'ny malefaka avo, avo amin'izao fotoana izao ary avo pulse fampiharana
Snubber Capacitors dia capacitors avo amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny terminal axial.Axial Film Capacitors dia hita ao amin'ny CRE.Manolotra lisitra izahay, vidiny ary angona momba ny Axial Film Capacitors.
1. ISO9001 sy UL voamarina;
2. Fanisana betsaka;
Ambongadiny High voltage Snubber Capacitor
Ny CRE dia manome capacitor snubber isan-karazany.
1. Kapasitera snubber vaovao novolavolaina sy novokarin'ny CRE
2. Ny mpitarika ny sarimihetsika capacitor famolavolana sy ny famokarana.
3. Raha mila fepetra manokana momba ny snubber ianao, dia mankanesa any amin'ny foibe famolavolana anay mba hahazoana capacitor snubber namboarina manokana.
Sarimihetsika metaly IGBT Snubber capacitor
Sarimihetsika Capacitor Snubber ho an'ny masinina welding (SMJ-TC)
Capacitor Model: SMJ-TC
1. Electrodes voanjo varahina
2. Habe ara-batana kely sy fametrahana mora
3. Mylar tape miolikolika teknolojia
4. Famenoana resin maina
5. Inductance andiany mitovy (ESL) ambany sy fanoherana andiany mitovy (ESR)
2. Volavolan'ny tendrony sy ny fisondrotana sy ny fiarovana amin'izao fotoana izao ho an'ny singa mifamadika amin'ny fitaovana elektronika
Ireo capacitor ireo dia mety amin'ny fiatrehana ny pulses amin'izao fotoana izao matetika amin'ny fiarovana GTO.Ny fifandraisana axial dia mamela ny fampihenana ny inductance andian-dahatsoratra ary manome fifandraisana elektrika azo antoka azo antoka sy azo antoka amin'ny hafanana mafana mandritra ny serivisy.
Dielectric fatiantoka ambany amin'ny sarimihetsika polypropylene Snubber capacitor ho an'ny fampiharana IGBT
1. Ny toetra mahatanty lelafo dia azo antoka amin'ny fampiasana plastika plastika sy famenoana epoxy izay mifanaraka amin'ny UL94-VO.
2. Ny fomba terminal sy ny haben'ny tranga dia azo amboarina.